Sidey noqon doontaa shaxda Man United fasalka bilaaan doona hadii ay ganacsi fiican ka sameeyaan suuqa kala iibsiga? – Gool FM
(England) 17 June 2019. Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa laga yaabaa inuu sameeyo isbadalo waaweyn oo dhanka ciyaartoyda ah inta uu furan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, dhawr ciyaartoy ayaa la filayaa iney baxaan kuwa kalana kooxda la keeno.
Macalinkaan reer Norway waxaa u dagsan qidad fiican oo dhanka suuqa ah, balse lama oga hadii ay maamulka siin doonaan qarash ku filan uu ciyaartoy kusoo iibsado.
Waxaa suuragal ah iney kooxda isaga tagaan David de Gea, Paul Pogba, Romelu Lukaku iyo Alexis Sanchez kuwaas oo aan la hubin mustaqbalkooda kooxda, sidoo kalana kooxda waxey ku raad joogtaa ciyaartoy ay ka mid yahiin: Joao Felix, Bruno Fernandes, De Ligt, Declan Rice iyo ciyaartoy kale.
Haddaba sidey noqon doontaa shaxda Re Devils hadii Ole uu ku guuleysto bartilmaamadyada lasoo calaameeyay uu doonayo inuu sameeyo.
Shaxdaan waxaa kasoo muuqday goolhayaha reer Holland Jasper Cillessen waana dooqa koowaad ee kooxda hadii uu Old Trafford isaga baxo David de Gea, sidoo kale Diogo Dalot ayaa loo soo xulay daafaca midig iyadoo dadka ugu badan aysan ku qanacsaneyn maadama uusan laheyn awood ku filan, waxeyna kooxda baadi goobeysay Wan-Bissaka oo ka tirsan Palace.
Sidoo kale Declan Rice ayaa ka mid ah xiddigaha khadka dhexe, sidoo kale Felix, Bruno Fernandes iyo Rabiot ayaa kula mataan ah kuwaas oo ah dhamaan ciyaartoy kooxda lala xiriirinayo.
Saxiixii ugu horreeyay Ole ayaa kasoo muuqday shaxda James, kaas oo kasoo hayaamay kooxda Swansea City, waxaana weerarka loo wakiishay Rashfrod.
Wey adag tahay in intaan ciyaartoy la isku helo iyadoo xilligaan la joogo.
SIDEY KULA TAHAY?